Ixabiso lesoftware- iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Ixabiso lisebhokisini, indleko ekukhuthazeni kwethu, ukusetyenziswa kwindlela esiyisebenzisayo ngayo, ukubaluleka kokuxabisa kwethu.
Lo mbandela obuhlungu kakhulu, kuxhomekeka kwinqanaba leembono othi ngubani, osebenzayo kwaye ohlawula iindleko zabo; siqhele ukudibanisa oko kulungele isofthiwe kunye neleyile yayo elandelwa yimboli yeli dola, kaninzi ayinakufumaneka kwimakethi amancinci okanye ngenxa yokuba siyayiqhathanisa nabanye kwimeko engafani ngokufanayo.
Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba iilayisensi zomthombo ovulekileyo ziyindlela engenakuguqulwa, kwaye kwisithuba seminyaka embalwa (ukuba akukenzeki) baya kuthatha indawo elungileyo yentengiso kuninzi lwezinto zehlabathi lobuchwephesha, ngendlela ezinzileyo (leyo ayenzi iyaqhubeka). Kodwa ukuba isoftware isimahla, oko akuthethi ukuba indlala yoluntu iyakuphela. Ukuphunyezwa, ukuveliswa kwezinto ezintsha, uqeqesho kunye nokuhlaziywa kunexabiso ekufuneka lihlawulwe ngumntu; kwaye ekugqibeleni isoftware yokurhweba kufuneka ibekhona ukuze izinto zithengiswe.
Xa ngale ntsasa bendimamele ilizwi likaGreg Bentley, zingaphi izigidi zeedola eziqokelelweyo kwiminyaka engama-25 ngesoftware yakhe yeMicrostation kunye nosapho, ndinokuba nengcinga yokuqala njengomtya wobubi obungalunganga kule ndawo. Kodwa xa siqonda ukuba eli lixabiso labo basungula izinto, kwilitye lesibini labanye nakwinkampani yabaninzi, siphela siqonda ukuba ngumvuzo womzamo wabo, ongazange wenziwa ngamaqabane abo aseyunivesithi angama-23 (kuquka nam, okanye utata wam).
Kusenokwenzeka ukuba sicinga ukuba eli tyala lithathwa kuba uninzi luye lwazisebenzisa kwaye lwaziphucula izixhobo zazo. Kuyinyani, kodwa abanye bakwenzile nokwabo umvuzo, abathi ngokomthetho wobomi babenokuphumelela ngayo nayiphi na enye isoftware, ukuya kwinqanaba elincinci okanye elincinci kodwa ngokuqinisekileyo ngomzamo ofanayo.
Ngoko, ukuba sinokugxeka amaxabiso kwesoftware, yeemingalo phambi kweemfuno zethu, umgangatho wenkonzo okanye nokuba nemigaqo-nkqubo yayo; Sifanele siqaphele ukuba sinokuyidla ngokubulela kubukho bayo; nokuba kusetyenziso lwayo okanye ukhuphiswano.
AutoCAD iwasebenzisa kakhulu inkumbulo, Bentley na unintuitive, gvSIG uhambisa olucothayo kakhulu, ESRI lubiza kakhulu, iphelelwe, kancinane, obuziintlobo ezininzi ezaziwayo, Google Earth kakhulu engacacanga Windows ...
Wokulindela khange iphumelele iimbasa ezininzi kwimbali, enze abangcolileyo badla ngokusebenzisa i elula (kwaye ngamanye amaxesha emnandi), kodwa usoloko (phantse) kungenzeka ukufumana i imbono "win-win" ezikwi of ixabiso le Ulwalamano:
-Impumelelo yam sisiphumo sobuchwephesha bam, ndibaxhaphaza bade babhubhe kodwa ngengeniso yabo bayikhulisile kwaye bawahlawula amatyala abo. Ekugqibeleni ndifunde ngakumbi ngezakhono zabo kunombongo wam, abanye baya kugqitha kum, kuba banamandla amakhulu.
-Bazokuthabatha ingxelo yakho, nangona ndifumana ihlombe ngoku; Ukungakuqondi oku kungakhokelela kwikhwele lobungcali okanye uxinzelelo. Kodwa ke baya kuba nempumelelo yabo, ndiya kuyonwabela kwaye le yityathanga ekufuneka yenzekile ukuba ngubani umphathi wam ngoku.
Into efanayo ifana nesofthiwe:
-Bentley wenza imali eninzi kwaye utshintshisayo uyinika umvuzo we-$ 300, kodwa kunye nezixhobo zakhe ndizondle abantwana bam, ulwazi olulwazileyo kunye namava.
-AutoCAD eyilawula kurhwebo lwehlabathi, kodwa ngenxa yokuthandwa kwayo, kuba abafundi abaninzi kwigumbi lam lokufundela ungavuma ukuhlawula kunye amawaka-waka eendwendwe zijongeka ukupha ukusetyenziswa yaye indlela usebenzise i keygen.
I -ESRI ayihloneli imilinganiselo ethile yoluntu, kodwa i-SIG ixabisa kakhulu kwaye iya kwinkomfa yaseSan Diego indiphefumlele ekukhuthazeni abantu.
Kuxhomekeka kwinto esiyenzayo, sinokuba nethemba lokungazithembi malunga neempawu ze-ESRI, iBentley, AutoCAD, gvSIG, Google Earth okanye iiWindows. Kodwa ziyimveliso yomntu owayenenyathelo lokuqala lokuzidala kwasekuqaleni, okanye ukusuka kwezona mbono zakudala ukuya kwinto eziyiyo ngoku. Inxalenye elungileyo yento esiyityayo yonke imihla kungenxa yobukho bayo, isixa sokuzingisa kwakho, into entsha kunye nokonwaba ebomini kusenza sonke siphumelele. Umendo lixabiso, impumelelo lixabiso.
Ndinike igama lesoftware ovelana nayo kancinane… kulungile, ukuba bekungekho yena, ngewungekho ulwazi lwakho kwaye ubuya kushiya ngaphezulu kwemizuzu esi-8 ubufunda le post, kuba le bhlog ayinakubakho. Ukuqukumbela, ixabiso lesoftware liya kuba kwimveliso esiyifezekisayo nokuba sinemali engakanani kuyo, nokuba kuninzi, kancinci, kuqoqosho, kuhlekisa okanye kuyonwabisa.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphefumulelwe ...
Post Next Arc Akukho zinto zendawoOkulandelayo »
2 Iphendula "Ixabiso lesoftware"
Kuyavunywa, ezinye zeentengiso ze-software zorhwebo zeenkampani ezinkulu zixhamla isikhundla sabo kunye nemonakalo kungekhona kuphela kumaziko kodwa abasebenzisi abasebenzisa iimveliso zabo.
Ngokubhekisele kwisoftware yasimahla, ukubheja kufuneka kuqhubeke, nangona uzinzo kufuneka luqwalaselwe nzulu. Sonke sizibonile izixhobo ezakhiwe ngeendlela ezahlukeneyo, zisenza phantse into enye, enye kwezine iyazixhasa kwaye ezinye ziphelelwe lixesha kwaye ziyafa. Ayisiyonto imbi, kodwa ithatha ixesha, inyathelo ... kwaye ekugqibeleni nemali.
Ukukhula kweelayisenisi zamahhala kulungile, nangona kusekufuneka kwenziwe umsebenzi wokudibanisa imizamo (kungekho kakhulu kwi-SIG) kodwa kwamanye amasebe.
Ndicinga umba ixabiso okanye ingqokelela software kwegunya ingxoxo thile livulwe. Indlela software free ijolise sokuxhasa kuphuhliso nokusetyenziswa izicelo mahala (free ubukhulu becala), kodwa hayi ukuba njengesihange amashishini kunye neenkonzo (kwimeko esahlukileyo xa ezi nkampani ukhankase izenzo ezingekho mthethweni kunye norhwaphilizo ukwandisa inzuzo yazo okanye ukukhonya kwimarike , ukuphula imithetho ye-antitrust yamazwe).
Ndicinga ukuba awuzange uphawule imfuneko yokuhlawula isofthiwe ethile. Yintoni eye ingxelo ngoku kukungabikho ezizezinye ukugcina inkululeko (elinye lamaxabiso angundoqo imifanekiso yangoku yezoqoqosho) ukukhetha, ukusetyenziswa nokuvelisa (funda mvume ukuba musa ngokungafanelekanga ithintela amalungelo yam imveliso yomsebenzi wam, okanye inkululeko yam yokukhetha ithuluzi elithile lobuchwepheshe).
Impendulo kule ngxaki lilungelo ukudala nokwazisa emarikeni iimveliso ezintsha ezinye ezikhoyo, ukuncedisana ubonelelo emarikeni kunye neentlobo ezintsha mvume kunye neempawu ezintsha kunye namaxabiso, xa bengqina inkululeko yokuzikhethela kwabathengi kunye nabasebenzisi.
Ukuba umba zaye imveliso yorhwebo, iinkampani abo bazuze kuyo kunye nexabiso layo kakhulu, nto leyo ahambisana mali karhulumente ukuze kuthengwe software lobunikazi okanye phantsi kwesizwe iinkampani kunye neenkampani ukuvelisa software ekhoyo. I-Absurd ingcamango, ewe ke, ukuba i-FSF okanye enye imibutho ayizange icebise. Ngokuphambene noko, injongo ihlala idala ukuveliswa kwemveliso emitsha kunye nezinye iinkonzo.